အကောင်းဆုံး KaiBiLi H. pylori Antigen Rapid Test ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |ကမ္ဘာဦး
KaiBiLiTMH. pylori Antigen Rapid Test သည် အရည်အသွေးကို ထောက်လှမ်းရန်အတွက် lateral flow chromatographic immunoassay တစ်ခုဖြစ်သည်။Helicobacter pylori (H. pylori) လူ၏မစင်နမူနာများတွင် antigens များကို ရောဂါရှာဖွေရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်။H. pyloriကူးစက်မှု။
H. pylori သည် ခရုပတ်ပုံသဏ္ဌာန်ရှိသော ဂရမ်အနုတ်ဘက်တီးရီးယားဖြစ်ပြီး၊ လူသားများတွင် အဖြစ်များဆုံး ကူးစက်နိုင်သော ရောဂါပိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ 50% ခန့်ကို ကူးစက်သည်။H. pylori သည် မစင်များ ညစ်ပတ်နေသော အစာ သို့မဟုတ် ရေကို စားသုံးမိရာမှ ကူးစက်နိုင်သည်။H. pylori ရောဂါပိုးသည် အစာအိမ်နာမဟုတ်သော dyspepsia၊ duodenal နှင့် gastric ulcers နှင့် active၊ နာတာရှည် gastritis နှင့် အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ နှင့် MALT (mucous-associated lymphoid tissue) lymphoma အပါအဝင် အစာအိမ်ရောဂါအမျိုးမျိုးအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
H. pylori ရောဂါပိုးကို ထိုးဖောက် သို့မဟုတ် ထိုးဖောက်မဟုတ်သော နည်းလမ်းများဖြင့် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။
H. pylori ပိုးကူးစက်မှုကို endoscopy နှင့် biopsy (ဆိုလိုသည်မှာ histology၊ ယဉ်ကျေးမှု) သို့မဟုတ် Urea Breath Test (UBT)၊ serologic antibody test နှင့် stool antigen test ကဲ့သို့သော ထိုးဖောက်မဟုတ်သော စမ်းသပ်နည်းများပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ထိုးဖောက်စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်းများဖြင့် လတ်တလောတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။10 တက်ကြွသောကူးစက်မှုနှင့် H. pylori နှင့်ယခင်ထိတွေ့မှုကြားတွင် ခွဲခြား၍မရသောကြောင့် ကုသမှုထိရောက်မှုကို အကဲဖြတ်ရန် နောက်ထပ်မပျံ့နှံ့နိုင်သောနည်းလမ်း၊ ဆီးပညာစမ်းသပ်ခြင်းအား အကြံပြုထားခြင်းမရှိပါ။
KaiBiLiTMH. pylori Antigen Rapid Test သည် မစင်နမူနာတွင် ရှိနေသော H. pylori antigen ကို စစ်ဆေးသည်။
KaiBiLiTMH. pylori Antigen Rapid Test Device သည် လူ့မစင်နမူနာများရှိ H. pylori antigens များကို အရည်အချင်းစစ်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်အတွက် လျင်မြန်သော chromatographic immunoassay တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရလဒ်များကို 15 မိနစ်အတွင်း ထုတ်ပေးပါသည်။စမ်းသပ်မှုတွင် လူ့မစင်နမူနာများရှိ H. pylori antigens များကို ရွေးချယ်ရှာဖွေရန် H. pylori antigens အတွက် သီးခြားပဋိပစ္စည်းများကို အသုံးပြုထားသည်။
နှိုင်းရ အာရုံခံနိုင်စွမ်း: 97.90%
စမ်းသပ်ကိရိယာများ 20 pcs
ထုတ်ယူသည့်ကြားခံဖြင့် မစင်စုဆောင်းပိုက် 20 pcs
KaiBiLiTMH. pylori Antigen Rapid Test P211007 20 စမ်းသပ်မှုများ
ယခင်- KaiBiLi COVID-19 IgG/IgM
နောက်တစ်ခု: KaiBiLi COVID-19 Antigen (ပရော်ဖက်ရှင်နယ် / တစ်ဦးတည်းစမ်းသပ်မှု)